VLC waa mid aad loo jecel yahay oo mid ka mid ah codsiyada warbaahinta ugu isticmaali aad kombuutarka. Dadku waxa ay dhibaato ku hoorto audio iyo video la isticmaalayo VLC. Laakiin qaar ka mid ah tallaabooyinka fudud aad gargaar ka isticmaalaya VLC inay sii qulquli video iyo files audio ka heli kartaa. Article waxaa loogu talagalay inay idinka caawiyaan sida aad u sii qulquli karaan video aad jeceshahay oo maqal ah oo isticmaalaya ciyaaryahan VLC on your computer.
Warbaahinta Stream ah
Tallaabada 1. Daahfurka VLC iyo in ay si "Stream"
Burcad VLC ka Player: abuurtaan fudud VLC ku rakiban Player barnaamijyada aad Computer ama ku rakibi by waxaa lagala soo website-ka VLC. Kadib markii ay Player VLC ah, waxaad ka heli kartaa bar menu iyo "Media" doorasho ka yar bar ah. Riix "Media" menu oo la helo "Stream" ka bedeley hoosaadka, iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa "Stream" ka-tuur ah keyboard "Ctrl + S".
Tallaabada 2. Ku dar faylka durdurka
The "Stream" doorasho arbushin doonaa suuqa kala ah "Open Media". In halkan, waxaad ku dari kartaa files warbaahinta si ay u sii qulquli, ama waxaad dooran kartaa CD ama DVD ama xataa file shabakad in ay baahin durdur. Haddii sanduuqa hoose ayaa lagu wadaa inuu "Play", doortaan "Stream" ka fursadaha. Hadda riix ah "Add ..." badhanka si ay u soo socda sii wado.
Tallaabada 3. Browse Your Computer si ay u dar File Media a
Hadda waxaad isticmaali kartaa drives computer si aad u dooro file a in aad rabto in aad ku darto. Dooro file iyo click markaas fudud on "Open" santuuqa si aad file warbaahinta daro baahinta durdur.
Tallaabada 4. Stream faylka Media Xulay
Ka dib markii ay ku daray file warbaahinta, aad haatan guji "Stream" badhanka hoose ee page in ay sii wadi. Waxa kale oo aad ku dari kartaa file a Cinwaan jeeg sanduuqa "Isticmaal file a Cinwaan".
Tallaabada 5. Dooro Stream Output
Ka dib markii tilmaamaha hore aad u horseedi doonaa in "Output Stream" window. Xidhiidhka il file waxaa halkan helay iyo hadda guji si "Next" oo raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Tallaabada 6. Dejinta meel loo ahaadana iyadaa u
Waxaad dooran kartaa caga halkan. Dooro caga cusub.
HTTP- kuu ogolaanayaa inaad baahin necbaa il kombiyuutarada kale.
UDP- kuu oggolaanayaa in aad samayn warbaahinta la Ciwaanka IP: ga oo gaar ah.
Ka dib markii xulashada caga doorbidayso, guji sanduuqa "Add". Waxaa laga yaabaa inaad calaamadee sanduuqa for "Display yaalo" inuu u ciyaaro files warbaahinta on your computer si aad u hubiso haddii ay si sax ah loo ciyaaro.
Tallaabada 7. U same Port iyo jidka
Halkan waxa aad ka eegi kartaa iyo dooran ee dekedda iyo jidka. Haddii aad rabto in aad sii qulquli files warbaahinta qaab iyo tirada kala duwan, hubi ee "Profile" doorasho ka dibna riix "Next" sanduuqa hoose ee suuqa kala.
Tallaabada 8. dhamestiro Stream ee
Hadda aad u baahan tahay si uu u dhameystiro baahinta si ay u sii qulquli. Si fudud guji "Stream" sanduuq oo wuxuu ku raaxaysan baahinta file aad soo xulay warbaahinta si ay u sii qulquli.
Connect Stream ah
Tallaabada 1. Open Network Stream ah
Si aad u xirmaan durdur, abuurtaan VLC ka Player oo la helo "Media" ka bar menu.
Hadda toggle hoos si aad u hesho "Open Network Stream" oo guji ku yaal.
Tallaabada 2. gala Network URL
The "Open Media" furmo suuqa la furi doonaa oo waxaad ka heli kartaa sanduuqa ay ku soo galaan URL shabakad faylka aad rabto in aad sii qulquli.
Tallaabada 3. dhamestiro Stream ah
Ku qor url network si ay u sanduuqa ka dibna riix si "Play" sanduuqa loogu xidhiidhinaya webigu ku soo xulay in aad rabto.
Hadda waxaad ka heli kartaa Window VLC ka ciyaaro file warbaahinta doorbiday in durdur. Saasuuna raacaya tilmaamaha, aad awoodi doontaa in ay ku xidhmaan durdur si fudud.
> Resource > Video > Sida loo sii qulquli Video iyo Audio Isticmaalka VLC